Iimephu zikaGoogle ziphucula ukusebenza kwayo-iGeofumadas
Ikhaya/Google umhlaba / imephu/I-Google Maps iphucula ukusebenza kwayo
Google umhlaba / imephuezintshaEhlabathini elungileyo
UGoogle ukhuphe ingxelo entsha ye-beta yesikhangeli sayo semephu, izixhobo ezinomdla kakhulu. Kule meko, ukuze uyisebenzise kufuneka wenze ikhonkco elitsha! ngasekunene kwesimboli yovavanyo lwelebhu, kwaye wenze iinketho zisebenze.
Isilumkiso sicacile, ziimvavanyo kuphela ezenziwayo, ke xa ekugqibeleni zikhutshelwa eluntwini, inokuba ayingabo bonke ababandakanywayo. Kananjalo ukuba ayizinzanga kuya kufuneka ubuyele kwidilesi:
Masibone ukuba abahlobo bayabuyiselwa.
Eyona isebenzayo, ngoku ukusondeza kungenziwa ngefestile yokusondeza, kunye nayo nayiphi na inkqubo yeCAD / GIS. Ukwenza oku, iqhosha livela ngezantsi kwebar yokusondeza.
Olunye umtsalane luhlobo lwembonakalo ye-isometric, ebizwa ngokuba kukujikeleza. Andazi ukuba benze njani, kodwa ugibiselwe ngamatye. Kumzekelo ongentla liziko leNgqungquthela apho i-ESRI ibamba khona iminyhadala yonyaka, kwi-Embarcadero Avenue eSan Diego. Bona ukuba badutyulwa iiyure ezahlukeneyo, kubonisa emthunzini weenqaba ezimbini, zahlukile kwezo zesakhiwo esigobileyo.
Kodwa ezi zinto zincinci azisusi kunambitha, ukhetho lokujikeleza ukusuka kwii-engile ezine kunye nokusondeza kuyinika into elungileyo. Inokufana okuthile kwi iliso leentaka de Ehlabathini elungileyo, kodwa akufani, oku kukhangeleka ngakumbi njengombono we-isometric kunye nombono ogqithiseleyo, kubonakala kukukhangeleka kum, nangona kungekho ndawo ezininzi.
Olu khetho lokujikeleza, lukwacwangciso, lukwazi ukujika ii-angles ze-90 degrees, ukugcina amagama rhoqo kwiindawo ezingezantsi.
Baye bongeza imisebenzi kwiqhosha lasekunene, apho unokubeka khona i-latate lat / ende, okanye enye "ekhoyo apha," ebonisa idilesi kunye neshishini kwindawo ekhethiweyo.
Ezinye izinto ziya kufuneka zihlolwe, njengezondlo ezinengqiqo, ezilumkisayo xa kuqukwa i-enclosure apho kungekho mxholo.
Ndiyishiya kuwe ukuzama.